Akuwona wonke wekhaya esikalini ekhishini kuqondile, okuvumela ukuba uthole isisindo imikhiqizo ukuba amagremu. Futhi akudingekile. Phela, uma kugxilwa kanjani umkhiqizo iqukethe ngokwako ezinye uhlobo izitsha ejwayelekile, isidingo sokulinganisela iphele.
Isisindo kuya ngevolumu
Ngo cookbooks ubudala ukuthi yashicilelwa phakathi nenkathi yamaSoviet, qiniseka ukwethula etafuleni. Ngosizo lwabo, kungenzeka ukuba kalula ukwazi inani noma yimuphi umkhiqizo, sokusikala, ezifana ngesipuni noma inkomishi. Futhi, ulwazi kuleli thebula kwaba mayelana kangakanani ushukela litre jar.
Okufanayo amatafula emizi manje. Okokuqala, isikhathi esabiweko kuthatha isikhathi esengeziwe. Futhi okwesibili, uma le nqubo ukwenze ngokuphindaphindiwe futhi uwayehlalise ephelele uyazi isisindo ngevolumu umkhiqizo wawo, khona-ke nje akudingeki ukwenza imisebenzi eyengeziwe.
Ngo izindlela eziningi ezithakazelisayo Setha isisindo ngqo komkhiqizo. Kungenzeka kanjani lokho, uma ufuna qiniseka dish out? Phela, uma fafaza ushukela phezu iso, awukwazi ukuqagela. Bese ukunambitheka wobuciko esizayo lihlukile edingekayo.
Uma izibuko manje amavolumu ngokuphelele ahlukene akhona, bese ubheka ubungako bawo uzulazule ngokuphelele zinkulu. Kodwa ukwazi ukuthi kungakanani litre jar ushukela, kulula kakhulu. Phela, ilitha ivolumu Standard Bank, ikakhulukazi kusukela lolu hlobo izitsha lapho avela ekhishini zonke wekhaya.
Ushukela - ukudla kubalulekile
Ngokuhambisana zokupheka nenani elikhulu kakhulu ukudla kumele mitigated. Lena ezibalulekile unika umzimba ngomzuzwana energy ukukhuthaza kanye ekuqhumeni amandla. Ushukela siqukethe carbohydrate - izinto ukuthi umzimba womuntu ngokushesha okukhulu kugaywe, ukukhulula esiningi namandla. Ukugaya ushukela iqala umlomo. Kungenxa yalesi sizathu, ukulahlekelwa enamandla amandla ukuze siphinde sithole ngokushesha yenza itiye elimnandi kakhulu. Ukuze wenze lokho, imininingwane mayelana nendlela ushukela kakhulu embizeni ilitha Yiqiniso, akudingekile.
Umbala elicwengisiswe isihlabathi esimhlophe, kodwa zinhlayiya kwakhona kungekho nto enemibala emihle. Kunezinhlobo eziningana izinhlobo ushukela, okuyinto eyayenziwe ngezinhlanga ezahlukene zokusetshenziswa:
Ukuze uthenge noma yiziphi zezinto eziphilayo, okuyinto ezweni lethu akuzona bendabuko, kufanele babe nolwazi property umkhiqizo. Uma kungenjalo, kungenzeka ukukhokhela mbumbulu. Mangaki ama-evamile i-sugar beet ungaphakathi ebhange ejwayelekile?
Isisindo ushukela ibhange
Ilitha ongama-800 amagremu ushukela. Yilapho-ke umbuzo ushukela kangakanani kuyadingeka 3-litre jar, kulula ukubala ukuthi lesi silinganiso kuyinto 2.4 kg.
Ulwazi mayelana kangakanani ukala 1 ilitha umkhiqizo, ezifana noshukela, lingase lidingeke ukuze recalculate isisindo sayo ngakolunye amavolumu. Lokhu kumele kwenziwe ukuze amathangi, ivolumu ngamalitha yaziwa. Uma kukhona isidingo, khona-ke kungenzeka ukulinganisa isisindo iyiphi ikhishi izitsha ekhona (izimbiza, cauldrons). Kodwa uma usebenzisa yenqwaba umthamo ke kukhona iphutha eliphawulekayo. Ulwazi mayelana eziningi kanjani omunye-litre jar ushukela, kwamukeleka lapho upheka noma ukusebenza esincane umkhiqizo.
Inani layo kungase kubhekwe njengokwelapha zamukelwa kuphela uma sokunquma isisindo eseduze ushukela. Ngenxa yalesi sizathu ochwepheshe zisebenzisa amatafula ekhethekile. Zihlanganisa imininingwane ngalokho isisindo ushukela, okuyinto ugcwele emgqonyeni noma ithangi imoto.
Kunoma ikuphi, kufanele kuphawulwe ukuthi indlela isekelwe eqinisweni kangakanani litre jar ushukela, efanelekayo izibalo kwansuku ekhaya. Futhi uma udinga ukuthola ulwazi olunembile, kubalulekile ukuze uthole isisindo yokukukala ushukela ku nesikali esinembile, usebenzisa indlela efanele. Kungase kudingeke luhlolo, ukuhlolwa laboratory, ukukhiqizwa ukulungisa iphutha noma ezinye izinjongo.
Indlela ukubamba ingilazi yewayini? ukuhlonipha
Yini i-imeyili? Kanjani ukwakha ikheli le-imeyili? Wazi kanjani ukuthi ikheli lakho le-?